Ikhaya laseHobbit Hole eWashington-Ukuqeshiswa kweKhaya ngokuKhethekileyo - Iingcamango Zokuhamba
Ukuhlamba Iimpahla Kubalulekile
Lg Ikhaya Liphela
Ikhaya laseHobbit Hole eWashington-Ukuqeshiswa kweKhaya ngokuKhethekileyo
Ukunyuka kwendlela ehamba e-Columbia River George yindlu ehlala eMhlabeni-ngokoqobo. Yaziwa njenge Indlu encinci eShire Kwaye ngokuyimfuneko ngumngxunya we hobby umniniyo, u Kristie Wolf, azakhele ngokuzikrwela endulini kwaye esebenzisa amaplanga kunye ne plywood ukunyanzelisa imilo yedome.
Ngokukhawuleza xa uhamba emnyango wesetyhula (siyazi, uyathandeka) uya kuhlola indawo yomlilo yamatye eyayiba ngokupheleleyo umboniso. Ngqo ngapha kuyo kukho ibhedi enkulu enesakhelo se-rustic esibonelela ngeziko lokugqibela lokugcina apho unokuzonga khona kwaye uphumle de ucime umlilo. Olunye ukhetho? Gcwalisa ibhafu yokufudumeza, yokuntywila emva kosuku lokuhlola iintaba.
Xa kuziwa ekuhlaleni ngaphezulu kule ndawo yokuhlala, umngxunya unokulingana nabantu ababini kunye neendleko $ 200 ngobusuku . Kodwa siqinisekile kakhulu INkosi yeeRingi abalandeli baya kucinga ukuba bubusela ukuhlala ubusuku bonke bephefumlelwe yimidlalo yabo abayithandayo. Kwaye nabathandi bezilwanyana bayayithanda nayo, kuba ingcuka ithi uninzi lwabamelwane ngamaxhama, imivundla neentaka. Ncwina.
[h / t IPlanethi eyedwa
ULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Iizakhelo zodonga ezihombisa izimvo
Iindlela zokuhombisa ze-2020
indlela yokusonga iihempe
amakhandlela akulunganga kuwe